12 qof ayaa lagu dilay magaalada Tacis - BBC News Somali
12 qof ayaa lagu dilay magaalada Tacis
Image caption Muddaharaadyada dalka Yemen
Boqollaal dadka muddaharaadaya ah ayaa ku dhaawacmay markii ay ploice-ku rasaas ku fureen iyo gas-ka dadka ka ilmeysiiya dad muddaharaadaya oo isku deyay inay socod ku tagaan xarunta madaxtooyada ee magaalada Xudeyda. Isu-soobaxa waxaa lagu taageerayay muddaharaadyo ka dhacay magaalada Tacis , halkaas oo dad badani ay ku dhaawacmeen iskudhacyo noocan oo kale ah maalintii shalay.
Kooxo dhallinyaro ah ayaa dalka oo dhan ku dhaartay inay sii kordhinayaan muddaharaadyadooda ay dowladda uga soo horjeedaan, waxayna ku baaqayaan in dalka oo dhan lagu dhaqaaqo olole dadweyne oo dowladda lagu khilaafayo. Ololahaasi waxaa uu durbadiiba ka bilawday magaalada Tacis, halkaas oo dadka deegaanku ay sheegayaan in dukaamadii oo dhan albaabada loo xiray iyadoo lagu taageerayo muddaharaadyada dowladda ka dhanka ah.
Madaxweyne Cali Cabdallah Saalax waxaa saaran culays aad u weyn, saaxiibbo ayaa ka tegay, ciidammada Yemen way kala jabeen, waxaana gacanta dowladda ka baxay dhul aad u ballaaran oo dalka ka mid ah, dhaqaaluhuna waa uu sii burburayaa. Haddana saas oy tahay Mr Saalax waa uu iska dhegatirayaa waxyaabahaas oo dhan, waxaana la sheegay inuu gaashaanka ku dhuftay qorshihii ugu dambeeyay ee mucaaradku u soo jeediyeen inuu si nabadgelyo ah awoodda u wareejiyo, waxaana uu sheegay madaxweyne Saalax inuu wada hadal ka gelayo wax uu ugu yeeray awood wareejin dastuuri ah oo keliya haddii ay rabshaduhu si buuxda u joogsadaan. Maalintii shalay, wasiirrada arrimaha dibadda ee dowladaha golaha iskaashiga khaliijka Carabta waxay soo saareen hadal ay ku muujinayaan inay ka walaacsan yihiin rabshadaha ka dhacaya dalka Yemen, waxayna sheegeen inay dhexdhexaadinayaan dhinacyada is-haya laakiin dad badan oo reer Yemen ah waxay is-weydiinayaan sababta ay waqtiga dheer u qaadatay ee ay mar hore u dhexdhexaadin waayeen.
Dhallinyaro badan oo reer Sanca ah waxay sheegayaan inay doonayaan oo kale in ay ogaadaan sababta Maraykanka, oo aad u taageeray muddaharaadyadii dalalka Tunisia, Libya iyo Masar, uu uga cagajiidayo inay madaxweyne Saalax u sheegaan inuu xukunka ka dego. Maraykanka iyo Britain waxay ka walaacsanaayeen suurta galnimada in Yemen ay gacanta u gashao Al Qaacida, oo iyadu si firfircoon dalkaas u joogta laakiin diplomaasiyiin badan oo reer galbeed ah oo ku sugan magaalada Sanca waxay sheegayaan inay hadda taageerayaan awood wareejin iyo inaysan hadda kaddib u arkin madaxweyne Saalax mid dammaanad qaadi kara xasilloonida dalka Yemen.